Vaovao - Torolàlana Tsotra amin'ny jono avy amin'ny sambo
Raha mila mamelombelona ny sambonao amin'ny seza vaovao ianao, don'Aza misalasala mitsidika ny tranokalanay, misy karazana karazana hofidinao,https://www.xgearsports.com/boat-seat/
Manome fientanentanana manokana ny fanjonoana avy eny amoron-drenirano na seranana, saingy tsy misy toy ny mandeha any anaty rano lalina kokoa mba hahazoana trondro.
Miaraka amin'ny sambonao manokana, azonao atao ny mikaroka ny toerana fanjonoana tonga lafatra ary, amin'ny fiarovana ny toerana misy anao, afaka miala sasatra ianao sy ny namanao ary miandry ny lehibe hanaikitra.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy azonao arahina mba hahombiazana rehefa manjono amin'ny sambonao:
Tahaka ny asa rehetra any ivelany, ny fanjonoana amin'ny sambo dia mila fiomanana.Tsarovy fa indray mandeha ianao'nariana, mety tsy hiverina any an-dranomasina mandritra ny fotoana kelikely ianao;noho izany dia mila manao izay hahazoanao antoka ianao fa manana izay rehetra ilainao.Manao lisitra mialoha, ary soraty ny zavatra madinidinika rehetra toy ny fandroahana bibikely sy ny haniny–dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa manao izany ianao't manadino na inona na inona.
Tsy lazaina intsony fa tokony ho ao anatin'ny toe-javatra tsara ny sambonao alohan'ny hivoaka.Ianao don'Tsy te hanana olana ara-mekanika aho rehefa any an-dranomasina, na farihy, na renirano.
Ankoatra izany, mila manana vatofantsika amin'ny habeny mety ianao.Misy fotoana tsara kokoa ny vatofantsika lehibe kokoa, toy ny rehefa manjono ao anaty rano lalina, satria afaka mitazona tsara kokoa ny sambonao izany.Mila manana rojo ampy ihany koa ianao–ny halavan'ny kely indrindra, raha ny fitsipika ankapobeny, dia tokony ho lava amin'ny sambonao, fa mety ho lava kokoa.
It'Ny tsara indrindra dia ny manao fikarohana mba hahitana izay vatofantsika mety amin'ny sambonao sy ny zavatra ilainao.Satria ny marika samihafa dia manana habe samihafa, izany'Ny tsara indrindra dia ny manamarina tabilao roa na maromaro amin'ny famokarana.Matetika amin'ny fivarotana an-dranomasina no misy azy ireny.
Ny fitaovana fanjonoana voakarakara tsara dia mety hilaza ny fahasamihafana misy eo amin'ny traikefa fanjonoana be loatra sy ny iray izay tena ireharehanao.
Saingy tsy tokony hojerena fotsiny ny fitaovana satria ianao'hampiasa azy io indray–tokony hojerenao tsy tapaka ny fitaovanao.
Midika izany fa manolo ny reels'mainlines, indrindra fa ireo izay mora rovitra toy ny tsipika monofilament;ary ovaina ny lohan'ny jono raha toa ianao ka mahatsapa ho nicks rehefa mihazakazaka ny tananao eo amboniny.
4, ALAMINO MIALOHA
Ny fanjonoana amin'ny sambonao dia mitaky mihoatra noho ny fametrahana vatofantsika any amin'ny toerana iray sy ny fanarianao ny tady.Na dia afaka manao izany aza ianao, dia izany'Tsy fomba mahomby indrindra satria mety handany fotoana fotsiny ianao.
Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny dianao fanjonoana dia mila manao drafitra mialoha ianao.Voalohany, fantaro hoe karazana trondro inona no tiana hotratrarina ary jereo raha izy ireo'mavitrika indray mandritra ny vanim-potoana.
Mifanohitra amin'izany, azonao atao ny manamarina hoe rahoviana io trondro io no tena mavitrika–toy ny toetr'andro tsara indrindra, ny fitarihan'ny rivotra ary ny onjan-drano mifanaraka amin'izy ireo–ary amboary ny dianao amin'io fotoana io.Ilainao koa ny mamaritra hoe aiza no tianao hanjonoana, ary inona ny tsorakazo sy ny haniny no mety indrindra amin'io faritra io.
5, Alohan'ny handehanana
Azo antoka fa izany's mampientam-po ny farany mandeha manjono amin'ny sambonao, fa izany'Zava-dehibe ny hanokana fotoana ampy alohan'ny hanalanao zavatra vitsivitsy.
6, Manaova akanjo mety
Ny fitaovana fidinao dia tokony hifanaraka amin'ny faritra hanaratoanao.Ohatra, ao amin'ny renirano na helodrano marivo izay mety tsy maintsy hidiranao, ny kiraro mafy dia safidy tsara amin'ny kiraro.Ny toetrandro koa dia lafin-javatra tokony hodinihina rehefa mifidy akanjonao, ary mila sosona bebe kokoa amin'ny toetr'andro mangatsiaka kokoa.
Ary koa, mety haharitra andro iray na lava kokoa ny fitsangatsanganana fanjonoana, arakaraka ny drafitrao, koa ento ny kitaponao mifanaraka amin'izany.Tadidio fa na dia mafana aza ny andro amin’ny antoandro, dia mety hidina ny maripana rehefa manakaiky ny alina.
Ary amin'ny fandehanana sambo rehetra, na dia amin'ny halavirana fohy aza, dia ataovy izay hahazoana antoka fa samy manana palitao fiarovan-tena ianao sy ny namanao.
7, Jereo ny toetry ny andro
Mila mitadidy izany ianao na dia izany aza'masoandro ny andro alohan'ny dianao, mety hiova izany amin'ny andronao'efa vonona handeha hanjono indray.Mety hiova be ny toetr'andro, koa ataovy izay hanamarina ny vaovao farany alohan'ny handehananao sambo.
Inona àry no fepetra tsara indrindra amin'ny fanjonoana?Mety ho mahafinaritra ho an'ny olombelona ny andro masoandro, fa ny trondro sasany dia mirona any amin'ny rano mangatsiaka kokoa mba hialana amin'ny hafanana.
Na izany aza, ny habetsahan'ny tara-masoandro tsara, indrindra any amin'ny faritra marivo, dia mety hahatonga ny karazana sasany ho mavitrika.Ny oram-baratra dia heverina ho tsara indrindra amin'ny fiompiana trondro, satria ny trondro dia mihinana alohan'ny andro ratsy.
Na izany aza, mety hanjary mampidi-doza tokoa ny rano ao anatin'ny tafio-drivotra, ka raha misy ho avy dia azonao atao ny manapa-kevitra ny hanemotra na hanafoana ny dianao.Ankoatra izany, ny trondro dia zara raha mandray ny haniny amin'ny andro ratsy.
Manova ny onjan'ny rivotra ny rivotra, ka sarotra ho azy ireo ny mijanona ao amin'ilay faritra, ary tsy dia mahita na mahatsikaritra ny haninao izy ireo.
Mety ho sarotra izany, fa rehefa manaikitra ny lehibe dia ho tsapanao ny valisoa amin'ny fikirizanao.
Fotoana fandefasana: Mar-09-2022